Maydka Askarta Kenya oo lagu daad gureeyay Wajeer | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Maydka Askarta Kenya oo lagu daad gureeyay Wajeer
Maydka Askarta Kenya oo lagu daad gureeyay Wajeer
Duhurnimadii shalay oo Sabti aheyd ayaa askar ka tirsan ciidamada Kenya waxaa qarax lagula eegtay inta u dhaxeysa deegaannada Qoraf Xaraar iyo Konton oo aad ugu dhaw xadka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya.
In ka badan 10 askari oo Kenyan ah ayaa qaraxaasi ku geeriyooday,kuwaas oo saarnaa gaadiidka qaraxa lala eegtay,waxaana qaar ka mid ah askarta qaraxaasi ku geeriyootay oo gaaraya ilaa Saddex la geeyay Magalada Wajeer ee Gobolka Waqoyi Bari dalka Kenya oo deegaan ahaan ay kazoo jeedeen.
Ehelada askarta geeriyootay iyo saraakiisha iyo maamulka Magalada Wajeer ayaa ku sugnaa Goobta la geeyay meydadka,waxaana ay sheegeen inay aad uga xun yihiin askarta ay qaraxa ku dileen Ururka Al-Shabaab.
Ma ahan markii ugu horreysay oo Ciidamo ka tirsan booliska iyo millatariga Kenya lagu weeraro deegaanada dhaca xadka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya,waxaana qarixii shalay sheegtay Al-Shabaab, iyaga oo sheegay inay dileen 11 ka tirsan Ciidamada Kenya oo ay qaraxa la eegteen ninjacasino.com, hayeeshee saraakiisha Ciidamada Kenya ay qireen 10 askari.
Previous articleFaroole oo Digniin adag u diray Maamulka Puntland
Next articleMaxuu RW Khayre ku soo arkay goobihii ay ka dhaceen Qaraxyadii shalay